သမီးလေးကို Stormi လို့ နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ Kylie – FemaleWear.net
သမီးလေးကို Stormi လို့ နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ Kylie
Reality show ကြယ်ပွင့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kylie ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ သမီးလေးကို Stormi လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Kylie ရဲ့ social media account ဖြစ်တဲ့ instagram နဲ့ facebook တွေမှာ သူ့သမီးလေးကသူ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ တင်ထားခဲ့တာပါ။ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Kylie နဲ့ သမီးဖြစ်သူ Stormi Webster ဟာ ပန်းရောင်လေးတွေဆင်တူနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေကြပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေပုံရတဲ့ Stormi ရဲ့ မျက်နှာကို သေချာပြတ်ပြတ်သားသား မမြင်ရပေမယ့် သူ့အမေ Caitlyn ရဲ့ ပြောစကားအရဆိုရင်တော့ သူ့မြေးမလေးက အချောလေးပါတဲ့နော်။
Stormi ဆိုတဲ့ နာမည်က သိပ်ပြီး အမှည့်များတဲ့ နာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာရော သိပြီးကြပြီလား?? ဟုတ်ပါတယ် Kylie ဟာ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ထုံစံအတိုင်း ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အမတော်တွေရဲ့ ခြေရာကိုနင်းပြီး သူ့သမီးလေးကို အများမှည့်နေကျမဟုတ်တဲ့ နာမည်ကိုပေးခဲ့တာပါ။ Stormi ဆိုတာက stormy ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကနေ ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အမဖြစ်တဲ့ Kim ကလဲ သူ့တူမအသစ်စက်စက်လေးနာမည်အတွက် သူ့ရဲ့ twitter account မှာ မုန်တိုင်း emoji လေးတစ်ခုကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
အမေနှစ်ယောက်ဖြစ်သူ Caitlyn နဲ့ Kriss တို့ကလည်း သူတို့ရဲ့ social media account တွေမှာ မြေးအသစ်လေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ post တွေ အသီးသီးတင်ထားကြပါသေးတယ်။ Caitlyn ကတော့ “ သမီးလေးက သမီးလေးမွေးပြီ။ ဒီအချိန်ထိရောက်အောင် အတူရှိနေခဲ့ရတာ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ သိပ်ကိုလှပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြေးလေးကြီးပြင်းလာမှာကို မစောင့်နိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးဖြစ်တဲ့ kylie လေးရဲ့ ကလေးလေးတုန်းက ပုံလေး” ဆိုပြီး သူ့အချစ်တွေကိုမြင်နေရတဲ့ caption နဲ့ post တစ်ခုတင်ထားပါတယ်။
Kriss ကတော့ “ အဖိုးတန်အမျိုးမှန်တဲ့ မြေးမလေး Stormi ရေ….မဆုံးနိုင်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ချစ်ရပါတယ်နော်..” ဆိုတဲ့ မေတ္တာစကားလေးနဲ့ Kylie တင်ထားတဲ့ ပုံလေးကိုပဲ ထပ်တင်ထားပါတယ်။
Meet my precious granddaughter Stormi! I love you endlessly ? ?? ?? #Repost @kyliejenner stormi ??
Stormi လေးရဲ့ အဖေဖြစ်သူ Travis ကတော့ သူ့သမီးလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး twitter မှာ post တစ်ခုပဲတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ တစ်ခုလေးက တော်တော်လေးကို တာသွားချက်က Stormi ဆိုတဲ့ နာမည်လေးရဲ့ သဲလွန်စပေးထားတာလို့တောင် ယူဆလို့ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “အမွှေစိန်လေး ရောက်လာပြီဟေ့” တဲ့….. စကားတွေအများကြီးမပြောခဲ့၊ post တွေအများကြီး မတင်ခဲ့ပေမယ့် Kylie ရဲ့ To Our Daughter ဆိုတဲ့ video လေးကိုကြည့်ရတာ Travis အနေနဲ့လဲ တော်တော် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်နော်။
Stormi လေးရဲ့ ပုံတွေကို ဘယ်တော့ ချပြမလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပေမယ့် သတင်းရတာနဲ့ လက်မနှေးပဲ ချက်ချင်း တင်ပေးသွားမှာမို့လို့ stay tuned ပါ fan တို့ရေ…
GiGi Hadid ကို New Face နဲ့တွေ့ရမယ့် Campaign